चीनबाट रक्षामन्त्री र भारतबाट विदेश सचिव नेपाल आउने…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
चीनबाट रक्षामन्त्री र भारतबाट विदेश सचिव नेपाल आउने…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : भारतबाट उच्च अधिकारीहरु धमाधम नेपाल भ्रमणमा आइरहँदा चीनबाट पनि यो क्रम शुरु हुन लागेको छ । आउँदो हप्ता चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फङ्गह १२ घन्टाका लागि नेपाल आउँदैछन् ।
फङ्गह विहान आएर बेलुका फर्कने तय भएको छ । उनी आउने दिनको खुलासा नगरिएपनि अर्को हप्ता आउने निश्चित भएको बुझिएको छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ्ग यी नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा थियो । उनी नभई रक्षामन्त्री आउने भएका हुन् ।
रक्षामन्त्री वाङ्ग यी स्टेट काउन्सिलर पनि हुन् । उनी चीनको मन्त्रिपरिषदका पाँचजना स्टेट काउन्सलरमध्ये एक हुन् ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगत्तै भारतका विदेश सचिव हर्ष श्रृंगलको अबको एक हप्तापछि भ्रमण हुँदैछ । भ्रमणको मिति नखुलाइएपनि दुवै देशले तयारी गरिसकेका छन् ।
श्रृंगलको नेपालसँग पारिवारिक साइनो पनि छ । उनको मामाघर नेपाल हो । यसअघि भारतका सेनापति मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको तीन दिने भ्रमण पूरा गरी फर्किएका थिए । उनले नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको दज्र्यान्ही समेत लिएका थिए ।
नरवणे अघि भारतको गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सीमान्त गोयल नेपाल आएका थिए । उनी एक रात नेपाल बसेका थिए । गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेका थिए । प्रोटोकल मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँग भेटेको भन्दै उनकै दल नेकपाभित्र आलोचना भएको थियो ।
Prev२२ वर्षका युवकका तीनवटी श्रीमती, तीनैवटी मिलेर खोज्दैछन् चौथी सौता !
Nextओलीवि’रुद्ध वि’द्रोह धुम्बाराहीबाटै उठ्यो, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व…हेर्नुहोस् ।
ओलीले एमसीसीसँग अर्को गोप्य सम्झौता गरेको प्रचण्डको खुलासा…हेर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1367)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1367)